भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय
सहकारी बिभाग नया बानेश्वर, काठमाडौं नेपाल
Collapse / Expand All
संस्था दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाहरु: के के हुन ?
आवेदकहरुले तोकिएको कार्यक्षेत्रमा स्थायी वसोवास गरीरहेको प्रमाण जुटाउन नसकेमा
आवेदकहरु कम्तिमा २५ परिवारबाट हुनु पर्नेमा नभएको अवस्था भएमा,
स्थलगत वुझ्न कर्मचारी आउदा तोकिएको समय र स्थानमा आवेदकहरु भेला नभएमा वा भेलामा आवेदकहरुको सनाखतमा कुनै कैफियत भएमा,
निर्दिष्ट प्रक्रिया पुरा नगरेको वा निवेदन साथ तोकिए वमोजिमको ढाँचामा कागजातहरु पेश नगरेमा,
पेश भएका कागजातहरुमा सदस्यहरुको दस्तखत नभिडेमा,
आवेदकहरु सम्पर्क वाहिर रहेको अवस्थामा पनि काम स्थगन हुन सक्ने,
आवेदकहरु सोही प्रकृतिको अन्य सहकारी संस्थाको संचालक वा आवेदन सदस्यका रुपमा कायम रहेको पाइएमा,
स्थानिय तहमा संचालित सोही प्रकृतिको सहकारी संस्थाबाट आवेदकहरुले सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिएमा वा संस्था संचालन हुने सम्भाव्यता नदेखिएमा,
संलग्न कार्ययोजना वमोजिम चुक्ता प’ँजी जम्मा गरेको भौचर पेश हुन नआएमा। (विनियममा उल्लेखित कूल पूँजीको कम्तिमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम चुक्ता प”ँजी हुनुपर्ने),
वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्था दर्ताका लागि तोकिए वमोजिमको विवरण फरक पर्न गएमा ।
दर्ता प्रक्रियामा के के कार्यहरु र कागजातहरु आवश्यक पर्दछ ?
कार्यालय प्रमुख वा सहकारी अधिकृतले विशेष गरी आवेदकहरुको विवरण परीक्षण गरी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन तोक आदेश सहित निवेदन दर्ता गर्ने । ajay
निवेदन साथ फाइलमा संलग्न कागजातहरु एक एक हेरी निवेदन दर्ता गर्दाकै वखत कर्मचारीले कुनै कुनै कैफियत देखेमा सो को लिखित सूचना दर्ता भएकै दिनमा उपलब्ध गराउने छन् ।
निवेदन साथ फाइलमा संलग्न विवरणहरु तोकिए वमोजिम भएमा वा पूर्व सूचना गरिए बमोजिमका कागजपत्र वा विवरण प्राप्त भएमा ३ दिन भित्र स्थलगत मुचुल्का र संभाव्यता अध्ययन गर्ने गरी समय र स्थान तय गरिने । यस कार्यमा आवेदकहरुको उपस्थिति अनिवार्य भएकोले समन्वय गरी मिति र स्थान तय गर्न बाधा नपर्ने ।
स्थलगत रुपमा सनाखत गरिएको विवरण र सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित कर्मचारीले बढीमा २ दिन भित्र कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
स्थलगत गर्दा कुनै कैफियत देखिएमा सो को जानकारी आवेदकहरुलाई गराइनेछ । कुनै कैफियत नदेखिएमा बढीमा ३ दिन भित्र संस्था दर्ता गरी प्रमाण पत्र एवं स्वीकृत विनियम उपलब्ध गराइनेछ ।
सहकारी संस्थाको नाम दोहोरिन नहुने हुँदा कागजात तयार गर्नु अगाडी प्रस्तावित नाम सहित कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्नेछ ।
घर जग्गा खरिद रजिष्ट्रेशन दस्तुर छुटका लागि निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने प्रमाणहरु के के हुन ?
घर जग्गा खरिद गर्न साधारण सभाको स्वीकृति,
घर जग्गाको मूल्याङ्कन,
संचालक समितिको निर्णय,
जग्गा धनी पूर्जा र नक्शाको प्रतिलिपि,
बिक्रेतासंग गरिएको कवुलियतनामा,
संस्थाको आर्थिक विवरण,
संस्था संचालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने केही कानूनी प्रावधानहरु के के हुन ?
संस्था दर्ता भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा प्रारम्भिक साधारणसभा गर्नुपर्नेछ ।
प्रारम्भिकसभाको काम संचालक समिति र लेखा समितिको निर्वाचन गर्ने हो ।
प्रत्येक वर्ष पौष मसान्त भित्र संस्थाले वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
साधारणसभा बोलाउन स्थान, समय र एजेण्डाको सूचना सबै सदस्यहरुलाई कम्तिमा १५ दिन अगावै अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्नेछ ।
प्रारम्भिक साधारणसभाको गणपुरक संख्या ५० प्रतिशत वा कम्तिमा १३ जना जुन बढी हुन्छ हुनुपर्दछ ।
वार्षिक साधारणसभाको गणपुरक संख्या २५ प्रतिशत वा कम्तिमा १० जना जुन बढी हुन्छ हुनुपर्दछ ।
गणपुरक संख्या नपुगेम ७ दिन पछि सभा बस्ने गरी समय, स्थान तोकिनु पर्दछ ।
विशेष साधारणसभाको गणपुरक संख्या भने १५ प्रतिशत मात्र हो ।
विनियम संशोधन गर्न भर्ने ५१ प्रतिशतको उपस्थिति र उपस्थित सदस्य संख्याको दुई तिहाई समर्थ गर्नु पर्दछ।
लेखा परिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने अधिकार साधारणसभाको हुन्छ ।
लेखा परिक्षणको कार्य एउटै व्यक्ति वा संस्थाले लगातार ३ वर्षभन्दा बढी गर्नु गराउनु हुदैन ।
लेखा परिक्षकको नियुक्ति गर्दा डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्वीकृति लिनु पर्दछ ।
आर्थिक वर्ष भुक्तान भएको ३ महिना भित्र लेखा परिक्षक नियुक्त गरी लेखा परिक्षण गराउनु पर्दछ ।
निरन्तर २ वटा वार्षिक साधारणसभा नगरिएमा संस्था खारेज भएको हुन सक्छ । कुनै कारणले ढिलाई हुन गएमा कार्यालयको स्वीकृति आवश्यक पर्दछ । सभा बसेको १५ दिन भित्र निर्णय प्रतिलिपि एवं लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा यस कार्यालय पेश गर्नुपर्नेछ ।
दर्ता खारेज भएको सूचना प्रकाशित मितिले ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनारवेदन गर्न सकिनेछ ।
प्रारम्भिक साधारणसभा भएको ६ महिना भित्र सम्बन्धित विषयगत संघको सदस्यता लिनुपर्दछ ।
संस्था संचालन गर्दा प्राय: गरिने त्रुटीहरु के के हुन ?
संस्था दर्ता भएको ३ महिना भित्रै प्रारम्भिक साधारणसभा नगरिने ।
संस्था दर्ताका लागि आवेदन गर्ने समूहलाई सहकारीको सिद्धान्त एवं संचालन विधिका वारेमा जानकारी नहुने ।
नियमित रुपमा पौष मसान्त भित्रै साधारणसभा सम्पन्न नगरिदिने ।
संचालक समितिको रिक्त पद संचालक समितिकै निर्णयबाट पूर्ति गरिने । रिक्त संचालक समितिको पद पूतिमा नियमानुसार साधारणसभाबाटै निर्वाचन पद्धतिबाट गरे पनि बाँकी अवधिका लागि पदावधि काय गर्नुपरेमा नयाँ समिति निर्वाचन सरहको पदावधि कायम गर्ने ।
५१ प्रतिशतको उपस्थिति विनानै विनिमय संशोधन सम्बन्धी निर्ण गरिने ।
आˆनो कार्यक्षेत्र बाहिरका व्यक्तिसंग कारोवार गर्ने ।
चुक्ता पुजीको १० गुणा भन्दा बढीपनि निक्षेप संकलन गर्ने ।
कर्जा लगानी गर्दा पर्याप्त सुरक्षणको व्यवस्था नगर्ने ।
इजाजत प्राप्त नभएका कार्यहरु समेत गर्ने ।
सहकारी संस्थालाई सिमित संचालक सदस्यहरुले आˆनो व्यक्तिगत उद्यमको रुपमा लिन खोज्ने ।
लेखा सुपरिवेक्षण समितिले आˆनो भूमिका निर्वाह नगर्ने ।
शेयर पुजीको तुलनामा १० गुणा भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्ने ।
विनिमय बमोजिमखडा गरिएको कोषहरुको उपयोग नगरिने ।
संस्थाको माइन्यूट किताबहरु ब्यवस्थित ढंगले नराखिने ।
संस्थालाई किनवेचको प्रक्रियामा लैजाने प्रयास गर्ने ।
संस्था दर्ता गरेर लामो समयसम्म निस्क्रिय राख्ने अर्थात विधिवत संस्था दर्ता खारेका लागि पहल नगर्ने ।
सभाद्वारा स्वीकृत विनिमय डिभिजन सहकारी कार्यालयको स्वीकृति नलिई कार्यान्वय लैजाने ।
संस्थाको प्रचार अर्थात विज्ञापन गर्ने प्रयास गर्ने ।
सभा तथा बैठक संचालन एवं अन्य कार्यक्रमहरु भड्किलो ढंगले संचालन गर्ने ।
सहकारीका आधारभूत पक्षहरु के के हुन ?
एक सदस्य एक मत,
सदस्यहरु वीच मात्र कारोवार,
कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेलाई मात्र सदस्यता,
निर्वाचनबाट कार्य समिति एवं लेखा सुपरिवेक्षण समितिको चयन,
कार्या समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको व्यवस्था र सक्रियता,
निर्धारित कोषको उपयो गरी सहकारी शिक्षा र तालिमको प्रवर्द्धन,
सहकारी संघको सदस्यता,
कर्मचारी प्रतिको कुनै गुनासो भए गनासो सुन्ने अधिकारीका रुपमा तोकिनु भएका अधिकृतसंग सम्पर्क राख्नु होला । समयमा समस्या समाधान नभए कार्यालय प्रमुखसंग सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ,
संस्था संचालन सम्बन्धमा प्रक्रियागत कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा कार्यालयका कर्मचारीसंग राखि सुझाव लिनुहोला । कार्यालयप्रति वा कुनै कर्मचारी प्रति उजुरी भएमा कार्यालय प्रमुखसंग सम्पर्क गर्नुहोला । गोप्य पमा लिखित उजुरी दिनु भएमा समेत त्यसलाई अनुसन्धानमा लगिनेछ । कृपया उजुरी पेटिका, टेलिफोन, हुलाक वा सोझै सम्पर्क मध्ये कुनैपनि सम्पर्कको माध्यम प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ,
संस्था निरीक्षण गर्न खटाइने कर्मचारीलाई संस्थाको कारोवार एवं सो संग सम्बन्धित निर्णय तथा कागजपत्रहरु उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु होल । तोकिए बमोजिम मासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रसितवेद यस कार्यालयमा पठाउनुका साथै समय समयमा दिइने निर्देशन पालना गर्नु गराउनु होला । रा।ष्ट्रय सहकारी दिवस (चैत्र २० गते) तथा अन्तराष्ट्रिय सहकारी दिवस (जुलाईको पहिलो शनिवार) भव्य रुपमा मनाउन संघ तथा यस कार्यालयसंग सहकार्य एवं सम्पर्क गर्नु होल ।
सहकारीका अन्तराष्ट्रिय सात सिद्धान्तहरु के के हुन ?
स्वेच्छिक तथा खुला सदस्यता ।
सदस्यहरुद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण ।
सदस्यहरुको आर्थिक सहभागिता ।
स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता ।
शिक्षा, तालिम र सूचना ।
सहकारीहरु वीच सहयोग ।
समुदाय प्रति चासो ।
© 2020, Department of Co-operatives, All Rights Reserved.